Ungayifumana njani i-backlink efanelekileyo kwi-TOP PR sites ku-Google?
I-Backlink ibaluleke kakhulu kuyo yonke imithombo yewebhu nokuba ingaba iwebhusayithi yezoshishino okanye indawo enkulu yokuthengisa kwi-intanethi. Ungakwazi ukufumana izixhumanisi zangaphandle ngokusebenzisa izimvo kwiiwebhusayithi ezihambelana niche okanye usebenzise iblogi ukuthumela okanye ukuthumela amanqaku kwiibhenkethi zentlalo nakwiindawo zokunxibelelana kwezentlalo.Kukho iindlela eziphambili zeekhonkco ezivelisa. Nangona kunjalo, kukho ezinye iindlela ezininzi ezongezelelweyo zokwakha izixhumanisi kwiwebhu.
Kutheni kufuneka usebenzise i-TOP PR sites for backlinks?
Ukufumana i-PageRank ephakamileyo nokwandisa iindawo zakho zeendawo, kufuneka ukhethe izikhonkwane zakho kwiWebhusayithi ye-PR. Wonke umnini wewebhusayithi unokuthanda ukufumana ii-link ezivela kwimithombo ye-PR ephakamileyo, yingakho uya kuba nobunzima bokufikelela kwezi ziza. Ngaphezu koko, ngokuqhelekileyo, olu hlobo lwewebhu luvumela kuphela ukulandelelanisa iifayile kumaphepha abo. I-Nof ilandele iinqununu aziyi kuzisa nayiphi na ijusi yelinki kwiwebhusayithi yakho nokuba ingafakwa kwiiwebhusayithi ezigunyazisiweyo okanye ze-spammy. Yingakho oko okufunayo kukulandela izixhumanisi ezingakhulisa iindawo zakho zeendawo kwaye zenze igalelo lakho lokulanda injini.
Nangona kunjalo, kukho ii-website ze-TOP PR apho kukho ukulandelelana kwe-backlinks. Masixoxe ngamanye emithombo yemithombo yewebhu.
i-Google + iholele inethiwekhi yendaba yoluntu ebeka kwi-TOP ye PageRank malunga nomlinganiselo ophezulu
. Kule nqonga, unako ukwakha kokubili ukulandela nokulandela i-backlinks.
Okokuqala, kufuneka ungene ngemvume kwi-akhawunti yakho ye-Google + kwaye uyiqinisekise. Qinisekisa ukuba unobhokisi leposi kwi-Gmail. Emva koko uye kwiphepha leprofayili yakho kwaye nqakraza kwicandelo "Ngeli". Emva kokuba ucoqa uze ufike kwi "Links" kwaye nqakraza kwi "Hlela" inketho. Unokongeza izixhumanisi zakho kweli candelo, kwaye ziya kuba zizenzekelayo ngokuzenzekelayo.
Esi siqendu seendaba sisininzi kwiintsuku zethu. Nsuku zonke izigidi zabantu zivule iinjongo zemfundo kunye nokuzonwabisa. Yingakho kungengqiqo ukusebenzisa le ncwadana ye-PR9 webhsayithi ngenzuzo yakho. Apha unakho ukwakha zombini iifayile kunye nefayile ezilandelayo.
Njengoko i-YouTube yiplatifti yeendaba kunye nemali engalinganiswanga yolwazi olubhaliweyo, unokongeza iblogi yakho okanye i-backlinks yakho kwi-"About" yakho okanye "Inkcazo" icandelo. Ezi ziqhagamshelwano zibhekwa njengezithuba ezingezantsi zize zizise i juice ngqo kwiziko lakho. Nangona kunjalo, ukuba ubeka ikhonkco lakho kwiqumrhu le "Idibaniselwano", unako onke amathuba okufumana umgangatho ophezulu wokulandela i-backlinks.
Njengoko kuninzi ezininzi zeebloggers zevidiyo ezithumela iividiyo zazo kwi-YouTube rhoqo, unako ukuseka ubudlelwane bezoqoqosho kunye nabo. Yonke into oyifunayo kukufumana iblogi edala amavidiyo okanye umxholo ohambelana nawe kwaye umcele ukuba asebenzisane. Kungenzeka ukuba uza kufumana impendulo efanelekileyo njengoko iibhloko zeblogi zifuna inkxaso yenkxaso.
Ukufumana i-backlink kwi-YouTube, kufuneka uqinisekise i-akhawunti yakho usebenzisa ikhonkco uze uthumele iwebhusayithi yakho kwi-Google Webmasters. Emva koko kufuneka ungene ngemvume kwi-akhawunti yakho ye-YouTube kwaye ukhethe umsebenzi "Ukusekwa kweShaneli" kwaye ekugqibeleni nqakraza "ukujonga iMpawu ezongezelelweyo. "Ngaphantsi kwecandelo eliphambili, uya kukwazi ukufaka isayithi lakho" kwicandelo leSayithi " Source .